Boqolaal Gabdho Kenyan ah oo diiday in Guryahooda tagaan iyo Sababta ka dambeysa oo la shaaciyay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Boqolaal Gabdho Kenyan ah oo diiday in Guryahooda tagaan iyo Sababta ka dambeysa oo la shaaciyay!!
Boqolaal Gabdho Kenyan ah oo diiday in Guryahooda tagaan iyo Sababta ka dambeysa oo la shaaciyay!!
Dec 17, 2016WARAR
Gabdho badan oo u dhashay dalka Kenya kuna nool deegaano kuyaala gobolka Pokot ee galbeedka Kenya ayaa diiday in ay guryahooda tagaan, waxa ayna gabdhahaasi hada hooy ka dhigteen iskuulo iyo Kaniisado halkaasi ku yaala.
Gabdhanan ayaa la sheegay in ay ka cabsi qabaan hadii ay guryahooda tagaan in la guddo waliba loo gudo qaabka dhibka badan ee fircooniga, waxa ayna taa badalkeeda go’aansadeen in aysan guryahooda dib ugu laaban xiliga fasaxa.
Inta badan Iskuulada iyo goobaha waxbarasho ee dalka Kenya ayaa la fasaxaa marka la gaaro bisha December, waxaana ardayda ay aadaan guryahooda oo ay kusoo qaataan fasaxa, waxaana waalidiinta qaarkood xiliyatadan oo kale ay ku sameeyaan Wiilasha iyo gabdhaha Gudniin.
Iskuulo badan oo la fasaxay ayaa la sheegay in ay ku nagaadeen gabdho badan oo ka cabsi qaba hadii guryahooda ku laabtaan in la guddo, waxaana maamulayaasha Iskuulada lagu amray in gabdhaha ay siiyaan Hooy iyo cuno si looga ilaaliyo in la gudo ama iyaga oo yar la guursado.
Gabdhaha Iskuulada ku nagaaday kana baqaya gudniinka Fircooniga ayaa bilaabay in ay qaadaan Heeso ay kula hadlayaan Walaidiintoona , waxa ayna ugu baaqeen in la joojiyo Gudniinka fircooniga loona ogolaado gabdhaha sida ay rabaan in ay noloshooda ku maareeyaan.
Dalka Kenya ayaa gudniinka Fircooniga waxaa laga mamnuucay sanadii 2012-kii, waxaana jira ganaaxyo adag oo lagu soo rogayo cida ku xad gudubka sharcigaasi, waxanaa wali qeybo kamid ah kasocota wali habka gudmniinka Fircooniga ee gabdhaha loo gudo.
Previous PostDaawo muuqaal: Beesha Habar-yoonis oo Muqdisho Banaanbax ka dhigtay Iyagoo Sheegay in Laga Boobay Kursigoodii! Next PostDAAWO MUUQAAL: Maxaa Iman kara Hadii kaadida muddo dheer la isku celiyo ?